Einstein,me and phantom vibrations
Einstein ,me and phantom vibration
मनुश्य शरीर vibration ले भरिएको हुन्छ भन्छन् वैज्ञानिकहरु । त्यो vibration व्यक्ति पिच्छे फरक हुन्छ रे । मनका तरङ्गहरु विचित्र किसिमले सल्बलाइरहेका हुन्छन् । खुशी दु:ख आदिको मनोभावको कुनै आकार देख्दिन म । कुनै आयाम पनि देख्दिन । बस्तुसरह तौलिन पनि सक्दिन म । त्यो निराकार भावलाई व्यक्त गर्ने शब्दहरु पनि भेट्दिन म।
शब्दकोषसँँग सापटी माग्न खोज्दा मन र मनको भावमा खुशी दुखी, उदासी मात्रै शब्द दिन्छ । कती हो त्यो खुशी मन भनेको ? कती हो त्यो दुखी मन भनेको ? खै । नाप्न भने सकिन । अनुभुती मात्रै हुन् भन्ने ठहर गरेँ मैले । सबै vibrations नै हुन् भन्ने मेरो विचारमन्थनबाट निस्कियो । सुख अनुभुतीका vibrations । दु:खका vibrations इत्यादि । फिल्मसमाग्री आदि सबै vibrations लाई पोषण गर्ने तत्व हुन् । अाइन्स्टाइनको जीवनमा आधारित एउटा डकुमेन्ट्री फिल्म हेर्ने मुड बन्यो । फिल्मको कहानी सुस्त बग्दै छ । ....
....अाज फेरि अाइन्स्टाइनलाई भूत चढेको छ । रसायनशास्त्र र भौतिकशास्त्रको भूत । सुत्रहरु नाचिरहेका छन् । सापेक्षताबादको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दा उनका खुट्टा भुइँमा छैनन् । खुशीका vibrations को उचाइले पूरै बातावरण फुरुङ्ग छ । । vibrations बग्छ रे । उनका vibrations बगेर उनको कोठाका भित्तामा ठोक्किँदै लडिबुडी खेल्दै छरिएको हुनुपर्छ । त्यस्तो सुमधुर बातावरणको सान्निध्यमा बस्ने जो कोहीको मन पनि सोही vibrations सँग रेजोनेन्स मिल्न पुग्छ। आज अाइन्स्टाइनकी जीवनसाथी पनि सँगै छिन् । धेरै समयपछि हुनुपर्छ अाइन्स्टाइनले उनको गालामा चुम्बन गरेको । खुशीले गदगद भएको ।
अाइन्स्टाइनलाई कपाल काट्ने फुर्सद पनि नहुने । त्यसैले उनी पनि निकै खुशी छिन् । अाइन्स्टाइनलाई सुत्रहरुको जन्जालबाट मुक्ति मिलेको देखेर । । धेरै समय अाइन्स्टाइन सुत्रहरुमै तल्लीन हुन्छन् । उनको प्रियसीले धेरै पटक अाइन्स्टाइन आँफै साथ नभएको महसुस गर्छिन् । अाइन्स्टाइनलाई उनले सार्है माया गर्छिन् । त्यसैले होला उनलाई phantom husband phenomenon हुन्छ बेलामौकामा । कहिल्यै उनका निम्ती फुर्सद नहुने । अाइन्स्टाइनलाई भने लामो सुत्रहरुको साधनामा तल्लीन हुँदाको मिठो फल लागेको भएपनि उनका दृष्‍टिमा त मुक्ति नै मान्नुपर्छ ।.........
मेरो मनले आफ्ना तरङ्गहरु पैदा गर्न थाल्छ । सिनेमाका पात्रहरुमा आफूलाई समाहित गर्ने प्रयास गर्नु कथानिर्देशन् उत्कृष्ट हुनुको उदाहरण हो । मेरा साथमा प्रिय साथी बसेकी छन् छेउकै सिटमा । उनी पप्कर्न क्वाप्प क्वाप्प हाल्दै ध्यानमग्न छिन् । जमाना यस्तै त हो ,घरमा फुल्ने मकै सिनेमा हलमा पप्कर्नमा पदोन्नति हुन्छ । पप्कर्नलाई बत्तिस दाजुभाइ मिलेर पेलिरहेका छन् एक पछि अर्को गर्दै । पप्कर्नलाई मायालु vibrations उत्पन्न नभएपनि मलाई भने भइरहेको जस्तो लाग्छ । हल्का नाक चुचो, गोलाकार अनुहार ,रातो टिसर्ट निलो जिन्समा औधी राम्री देखिएकी पो छन् आज । प्रचलित कोरियन स्टायल भने पनि चस्मामा त गान्धी स्टायल नै देख्छन् है मेरा आँखाले । गोला अाकारका ठूला चस्मा । धान्ने फ्रेम र डन्ठिलाई सास्ती हुनेजस्तो देखिने । उनी,म र पप्कर्नमात्रको अस्तित्व । फिल्मको पर्दा गौढ हुन पुग्यो मेरा लागि । त्यसैगरी अाइन्स्टाइन पनि पर्दाबाट बिलाउँदै गए । सबै vibrations मिठासपूर्ण छन् । उनी पनि अलप हुँदै जान्छिन् । .......
“शम्भु । शम्भु ।।।।।ड्युटि थियो कि। निदाएछौ त ..... ” सरको स्वर कानमा गुन्जिन्छ। “ हल्का सन्चो नभएर । भाईरल ले समात्यो कि जस्तो छ सर । “ टेबलमै निदाएछु म । सबै phantom पात्रहरु रहेछन् । आँखा मिचेर डिस्चार्ज् लेख्न थाल्छु म। घडीले २ बजाउनै आँटेछ । दिवा ओ पि डिको समय । खल्तिमा घ्यर् घ्यर् गरेको महसुस हुन्छ । ल अब कसले कल गरेछ भनेर मोबाइल निकाल्छु । इन्बक्स र कल शाखामा रित्तो छ हाल्सालैको गतिबिधि । प्रिय साथीको कल र मेसेज नआएको त जुग बित्यो । के बजेछ त घ्यर्‍ घ्यर । यस्तो धेरै पटक हुने गरेको छ । माम्शपेशी खुम्चिएर हो कि ?
मोबाइल बजेजस्तो महसुस हुने तर वास्तवमा बजेको नहुने । जसलाई भनिन्छ ” phantom vibrations “ । कसैको मनको vibrations अनुकुल छ कि भनेर अनुभुति गर्दा वास्तवमा अनुकुल नहुने । कोही साथमा छ कि भन्दा साथमा नहुने । प्रिय साथीसँग छु कि भन्दा टेबुलमै निदाएर उठ्ने । कोही गतिलो नेता छ कि भन्दा नहुने । मानिएकाहरुमा ज्ञान छ कि भन्दा सबै भित्र खाली हुने । सबै एक से एक phantom phenomenon नै हुन् । मस्तिस्कलाई झुक्याउने । उल्लु बनाउने । अाइन्स्टाइनले मात्रै होला सबैका लागि लाग्ने भौतिकशास्त्रका phantom vibrations सिद्धान्तमा उतार्न सक्ने ।वास्तविक बनाउन सक्ने । अरु सबैको काम त झुक्याउने न हो सबैका मस्तिस्कलाई । हृदयलाई झुक्याउने । मस्तिश्कलाई झुक्याउने । अस्तित्वलाई झुक्याउने ।
Binita Timilsina June 12, 2019 at 7:56 PM
Nice one daju 🙂🙏 enjoyed reading
Lanahksham March 26, 2020 at 4:18 AM
Thank u binita